Aqalka Sare oo lagu wado in ay maanta kulan ku yeeshaan magaalada Muqdisho – Kalfadhi
Aqalka Sare oo lagu wado in ay maanta kulan ku yeeshaan magaalada Muqdisho
Xildhibaanada Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa lagu wadaa in maanta magaalada Muqdisho ku yeeshaan kulan-koodii caadiga ahaa waxaana la filayaa in uu shir guddoomiyo Cabdi Xaashi Cabdullaahi, Guddoomiyaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Kulankaan ayaa ah kulanka 5aad ee Kalfadhiga 5aad sida ay shaaciyeen Guddiga Warfaafinta ee Golaha Aqalka Sare. Lama shaacin Ajendaha kulanka maanta ee Golaha Aqalka Sare ee Baarlamanaanka Soomaaliya ha-yeeshee waxaa la filayaa in kulankooda lagu soo hadal qaado Khilaafka u dhaxeeya Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Madaxda Maamul Gobaleedyada dalka kuwaas oo xiriirkooda gaaray meel aad u xun.
Sidoo kale Xildhibaanada Aqalka Sare ayaa ka doodi doona Sharciyo horyaala fadhiga Aqalka Sare kuwaas oo ka soo gudbay Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Aad uma badna kulamada Xildhibaanada Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya Kalfadhiga 5aad ee sanadkaan waxa ayna dhowr bilood oo uu furan yahay ay yeesheen 4 kulan oo kaliya.
Xildhibaan Jeesow oo Madaxweynaha Jubbaland ku eedeeyay in uusan marna ka hadlin dhibaatooyinka Kenya ee Jubbooyinka
Madaxweynaha Soomaaliland oo Puntland ka dalbaday in ay Maxaabiis is-dhaafsadaan